Rasuulladdii iyo Xertii Ciise Cabsi Laʼaan Bay Dadkii Wacdiyeen | Farriinta Kitaabka
Kiniisadda Kirishtaanka ah si dhaqsi ah bay u weynaatay inkastoo silic jiray
CIISE markuu samada u kacay waxaa ka soo wareegtay 10 maalmood oo waxay ahayd Iiddii Yuhuudda oo Bentekoste sanadkii 33 C.D. Xertiisii oo qiyaastoodu ahayd 120 baa guri Yeruusaalem ku yaalla ku ururay. Si aan la filayn gurigii waxaa ka buuxsamay sanqadh u eeg dabayl xoog leh. Xertii waxay bilaabeen inay ku hadlaan si mucjiso ah afaf kale aynan aqoon. Dhacdooyinkan cajaaʼibka leh maxaa ka dambeeyay? Ilaahay baa ruuxiisa quduuska ah siiyay xertii Ciise.
Bannaankii waa la buuxay dad badan baa ka yimid dalal kale siday u iidaan iidii. Markay maqleen xertii oo si fiican ugu hadlaya luqadahooda aad bay u yaabeen. Butros markuu u micneeyay wixii dhacay wuxuu u tilmaamay sii sheegiddii nebi Yooʼeel qoray. Wuxuu qoray in Ilaahay yiri: “Ruuxayga ayaan ku shubi doonaa dad.” Markay taasi dhacdana mucjisooyin kala duwan bay kuwa hela sameyn kari doonaan. (Yooʼeel 2:28, 29) Markay waxyaalahan dhaceen oo la arkay quwadda ruuxa quduuska ah waxaa caddaatay in isbeddel weyn yimid. Ilaahay nimcadiisa wuu ka ceshaday reer binu Israaʼiil oo waxay u wareegtay kinisadda Kirishtaanka ah oo cusbayd. Hadda kaddib kuwii rabay inay Ilaahay si uu aqbalaya ugu adeegaan waxay ahayd inay ka mid noqdaan raacayaasha Ciise.
Waqtigaas xertii Ciise aad baa looga hor yimaadday oo cadaawayaal baa xabbisay. Laakiin habeennimadii malaaʼigtii Yehowah baa albaabbada xabsiga furtay oo u sheegtay xertii inay wacdiga sii wataan. Aroortii bay ku shuqul galeen wixii malaaʼigtii fartay. Macbudkii bay galeen oo waxay dadkii bareen warka wanaagsan oo Ciise ku saabsan. Wadaaddadii ka soo horjeeday aad bay u xanaaqeen oo waxay ku amreen inay wacdigooda joojiyaan. Cabsi laʼaan xertii waxay ku jawaabeen: “Waa inaannu Ilaah addeecno intaannu dad addeeci lahayn.”—Falimaha Rasuullada 5:28, 29.
Silicii wuu kordhay. Yuhuudda qaarkood baa nin xer ah oo Istefanos la yiraahdo ku masabbiday inuu Ilaahay been ka sheegay oo caayay. Way dhagxiyeen oo wuu dhintay. Dilkii waxaa daawaday oo raalli ka ahaa Sawlos oo ahaa nin dhallinyaro ah oo Tarsos ka yimid. Waxyaalahan kaddib ninkani wuxuu u safray Dimishaq siduu u soo xiro qof alla qofkii raaco Masiixa. Intuu jidka ku jiray iftiin samada ka yimid baa ku wareegay. Wuxuuna maqlay cod leh “Sawlosow, Sawlosow, maxaad ii silcinaysaa?” Sawlos oo nuurkii indhatiray baa codkii ku yiri: “Yaad tahay?” Codkii baa jawaabay oo yiri: ‘Waxaan ahay Ciise.’—Falimaha Rasuullada 9:3-5.
Saddex maalmood kaddib Ciise baa Sawlos u soo diray nin xer ah oo Ananiyas la yiraahdo siduu indhaha ugu furo. Sawlos waa la baabtiisay oo si geesinimo ah buu u bilaabay inuu waxyaalihii Ciise ku saabsanaa ka wacdiyo. Dabadeed waxaa loogu yeeray rasuulka Bawlos oo wuxuu noqday mid dadaal badan oo ka mid ah kiniisadda Kirishtaanka ah.
Xertii Ciise waxay warka wanaagsan ee Boqortooyada Ilaahay ku wacdiyi jireen Yuhuudda iyo reer Samaariya keliya. Haddaba malaaʼig baa u muuqatay nin Ilaahay ka cabsan jiray oo Korneeliyos la yiraahdo oo ahaa taliyaha ciidanka Rooma. Malaaʼigtii waxay u sheegtay inuu u cid diro rasuulka Butros. Butros oo ay soo weheliyeen walaalo kale baa Korneeliyos iyo reerkiisa soo booqday oo wacdiyay. Intuu Butros weli hadlayay ruuxa quduuska ah baa ku soo degay dadkaas rumaysadka leh oo aan Yuhuudda ahayn. Butrosna wuxuu amray in lagu baabtiiso magaca Ciise. Dabadeed waddadii nolosha weligeed ah baa u furmatay dadka quruumaha oo dhan. Kiniisaddii diyaar bay u ahayd inay meel kasta ku faafiso warka wanaagsan.
—Casharkan wuxuu ku saabsan yahay Falimaha Rasuullada 1:1–11:21.
Maxaa dhacay Iiddii Bentekoste?
Markii xertii Ciise dadka wacdiyeen cadaawayaashoodii maxay sameeyeen?
Waddada nolosha weligeed ah sidee baa loogu furay dadka quruumaha oo dhan?
Wadaag Wadaag Rasuulladdii Cabsi Laʼaan Bay Dadkii Wacdiyeen